YOUTUBE ကိုပေါ်ဗီဒီယိုများအတွက်စာတန်းထိုးအောင်လုပ်နည်း - YOUTUBE ကို - 2019
သငျသညျအချိန်ကြာမြင့်စွာရေနွေးငွေ့ကိုသုံးပါလျှင်, သင်ဖြစ်ကောင်းသင် store မှာဝယ်နိုင်သမျှသောဂိမ်းနှင့်အခြားပစ္စည်းများကိုသုံးစွဲငွေဘယ်လောက်စိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြသည်။ ဒီအညွှန်ပြချက်သင့်အကောင့်၏တန်ဖိုးအဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။ သင်သည်သင်၏မိတ်ဆွေများကိုဤငွေပမာဏကိုဝါကြွားနိုင်, သင့်အကောင့်၏ကုန်ကျစရိတ်ထွက်ရှာပါ။ သူတို့ကြာကြာ Steam'om ပျော်မွေ့နိုင်သောမမေ့မလြော့ပါနဲ့ပိုက်ဆံ၏ကြီးမားသောငွေပမာဏပေါ်တွင်ဂိမ်း၏ကြီးမားသောနံပါတ်ရလာနိုင်တယ်လို့ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုကောင်းကောင်းသူတို့သည်သင့်ထက်အများကြီးပိုဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်သင်မည်သို့သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုရေနွေးငွေ့၏ကုန်ကျစရိတ်သိလားရေနွေးငွေ့အပေါ်ကုန်ရပြီကြောင့်ဖြစ်ပါမည်နည်း
သင်သည်သင်၏ account ကိုရေနွေးငွေ့ရောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလုပ်ဆောင်မှုသည်ဤပလက်ဖောင်းဂိမ်းမှ developer များအားပေးပါဘူး, ဒါပေမယ့်ရေနွေးငွေ့အကောင့်အသစ်များ၏ရောင်းဘို့အားလုံးအတူတူပင်ငွေပေးငွေယူဖြစ်ဖို့ရာအရပျများမှာပေမယ့်အကောင့်ကိုကုန်ကျစရိတ်လည်းလိုအပ်ပေသည်။
ရေနွေးငွေ့အကောင့်ကုန်ကျစရိတ်သင်သည်သင်၏အကောင့်ပေါ်တွင်ရှိသည်သောဂိမ်း၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်သူတို့ကိုရန်များအပြင်, အမျိုးမျိုးသောဂိမ်းအရာဝတ္ထုနှင့်တူ၏။ တွက်ချက်သော, သငျသညျအထူးဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုချင်သင့်အကောင့်၏ကုန်ကျစရိတ်ထွက်ရှာတွေ့ဖို့အရေးအပါဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သော Google သို့မဟုတ် Yandex အဖြစ်မဆိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ထဲမှာရှာတှေ့နိုငျန်ဆောင်မှုများ။ ဤတွင်ထိုကဲ့သို့သောဝန်ဆောင်မှု၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်:
သင့်အကောင့်တန်ဖိုးကိုရေနွေးငွေ့၏တွက်ချက်မှုအဘို့န်ဆောင်မှုများကြောင့်ပေါ်ကုန်သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံရေတွက်လို့ရပါတယ်, သူတို့အသီးသီးသင့်အကောင့်ပေါ်မှာဂိမ်းများကိုဘယ်လို, ပစ္စည်းကိုသိရန်လိုအပ်ပါ, သင်သည်သင်၏ရေနွေးငွေ့အကောင့်ကို အသုံးပြု. ဤဝန်ဆောင်မှုကို log in လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်ထိုသို့ပြု ပုံရိပ်မှာညွှန်ပြရာကို input ကိုခလုတ်, နှိပ်ခြင်းဖြင့်။ သင် button ကို click ပြီးတာနဲ့သင့်ရဲ့အကောင့်ကို log နိုင်ပါတယ်ရှိရာအရာရှိတဦးကရေနွေးငွေ့ site ကိုမှအကူးအပြောင်းကကျူးလွန်ပါလိမ့်မည်။
သင့်ရဲ့ username နဲ့ password ကိုခိုးယူခံရလတံ့သောအရာကိုမကြောက်ကြနိုင်သလား, ထို service ကိုရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ပရိုဖိုင်းကိုမှရေနွေးငွေ့အကောင့်ချည်နှောင်။ ဒေတာခညျြနှောငျလိမျ့မညျတစ်ပြိုင်နက်, သင်သည်သင့်အကောင့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုမြင်နိုင်ပါသည်။ သင်ဆဲသင့်အကောင့်များ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်နေကြလျှင်သင့်အကောင့်၏တန်ဖိုးကိုသင်ယူဖို့သင့်အကောင့်ဖို့ link ကို copy ။ ဤအချက်အလက်ဝန်ဆောင်မှု၏အထက်ပိုင်းအတွက်သင့်လျော်တဲ့လိုင်းထဲသို့ ဝင်. ရမည်ဖြစ်သည်, ဒီဥပမာထဲမှာ, ရုံဝန်ဆောင်မှု၏အောက်ခြေတွင် link ကို click နှိပ်ပြီး, ဒါကြောင့်အကောင့်တန်ဖိုးကိုကြည့်ရှုရန်, ရေနွေးငွေ့အကောင့်သို့ logged နေကြသည်။
ဒါ့အပြင်သင်အကောင့်ကုန်ကျစရိတ်ဖော်ပြရန်ရှေ့တော်၌ထိုရုရှားကလူပိုကောင်းမှနေသားတကျဖြစ်ကြပြီးဖြစ်ကောင်းရုရှားရူဘယ်ဖြစ်ဘို့, သငျသညျ, စျေးနှုန်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတဲ့အတွက်ငွေကြေးရွေးချယ်သင့်, ထို့နောက်သင် account တစ်ခုတန်ဖိုးကိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပြသသည့် Confirm button ကိုနှိပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
လျှော့ဂိမ်းဝယ်ယူဖယ်ထုတ်ပြီးသင့်အကောင့်နှုန်းကြောင်း, သောကွောငျ့ဖွစျသညျ ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ, ကုန်ကျစရိတ်အကောင့်သို့သင်လျှော့စျေးခြင်းမရှိဘဲအပေါငျးတို့သဂိမ်းများကိုဝယ်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်ကိုယူပြီးတွက်ချက်, သင်တစ်ဦးလျှော့စျေးအနည်းဆုံးလူအပေါင်းတို့သည်ဂိမ်းများကိုရရှိပါသည်လျှင်ဤဝန်ဆောင်မှုအတွက်လမ်းကိုလည်းသင့်အကောင့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုပြသနေသည်။ ထို့အပြင်သင်ကြည့်ရှု, သင်၏အကောင့်အကြောင်းကိုအခြားအချက်အလက်နိုငျသညျ, ဥပမာအားဖြင့်ဂိမ်းပျမ်းမျှစျေးနှုန်းအပေါင်းတို့၏အရေအတွက်ကိုဂိမ်းများကိုဝယ်ယူခြင်းနှင့်, ယေဘုယျအားဖြင့်ဒါပေါ်သို့ပွေးလေ၏စီဂိမ်းအတွက်သုံးစွဲသူတို့ရဲ့ရာခိုင်နှုန်း, ပျမ်းမျှအားအချိန်နှင့်ဘယ်တော့မှကြောင့်ဂိမ်း၏နံပါတ်-ons တွေကိုထည့်ပါ။ ဒါ့အပြင်ဤနေရာတွင်သင်၏အသီးအသီးဂိမ်းဝယ်ယူမည်မျှတွေ့မြင်နိုင်သည်။
ဗီဒီယို Watch: P!nk - Walk Me Home Official Video (နိုဝင်ဘာလ 2019).